Inkululeko yomxholo sisiseko esiphambili sokhuphiswano lweAdobe kubaqulunqi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Adobe yile Yaziwa kwihlabathi liphela ngenxa yoyilo loyilo lwegraphic apho uthotho lweenkqubo zihlala khona etshintshe imbonakalo yangoku yoyilo kunye nobugcisa. Ngaphandle kokukhupha uhlaziyo rhoqo ngonyaka, ikwanakho ukudibanisa amagcisa ehlabathi ohlukeneyo kukhuphiswano kunye namabhaso.
Ngeli xesha ufuna ukuba uzicel 'umngeni kukhuphiswano #Umceli mngeni ngokujonga kwakho ukuphumelela amabhaso amakhulu. Njengoko i-Adobe iyalela, umceli mngeni ngowakho ukubonisa le nkampani ubuchule bakho bokuqamba kukhuphiswano lwabo, abalubize ngokuba "Celomngeni umbono wakho."
Kwakutshanje nje ukuba iAdobe igqibe ukuthatha ukhenketho lweplanethi ngo "Road to MAX" kunye nezo Iindawo ezintle apho abafoti abathathu bavelise uthotho lweefoto ebaluleke kakhulu. Iindawo ezinjengeLos Angeles, iPhoenix kunye neGrand Canyon zisebenze njengeyona panorama ilungileyo nganye nganye.
Kodwa kukhuphiswano apho bafuna ukukucaphula ukuze ucelomngeni kwimbono yakho ngalo yenza umsebenzi wokudibanisa ophefumlelwe ngumxholo "Inkululeko" ngezixhobo ezikhethwe kwangaphambili kwiLifu lokuDala kunye neefoto ezisuka kwiAdobe Stock yamalungu eqela lakho leNdlelatoMAX17.
Ophumeleleyo uya kuba ngomnye wee-12 zooMboniso beeNdwendwe eziBonakalayo ngo-2018 ngokufikelela kwi-VIP kwimisitho ekhethekileyo ye-Adobe. Ukuze ube uphumelele udinga umsebenzi kwi-Adobe Stock, umsebenzi ovela kwiLifu lokuDala, kunye nayo yonke into oyilayo malunga nomxholo othi "Inkululeko."
Unokuzikhuphelela into oyifunayo esi sixhobo ibonelelwe yiAdobe kwilayibrari yeCC, Sebenzisa enye yeefoto ezintathu zabafoti uNathalie, uRich noTomas kwaye utolike ingoma "Libertad". Abanye abaphumeleleyo baya kukhetha i-iPad Pro, i-iPad Air kunye nokubhaliselwa konyaka omnye kwi-Adobe Stock, nayo yonke enye.
Ngoko ke, Sele ithathe ixesha ukukhupha ubuchule bakho bokuzama ukuzama ukuphumelela naliphi na ibhaso Ngenye yeenkqubo zakho ezihlaziyiweyo kutshanje njengeAdobe Cloak.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Thatha inxaxheba kukhuphiswano lweAdobe apho kuya kufuneka ucelomngeni kwimbono yakho
Uyilo olumangalisayo lwethala leencwadi laseTshayina eligcina iincwadi ezizigidi eziyi-1,2